Ukubonga yisibunge semilingo: Kwenza uphile kancono - Bayede News
Ukubonga yisibunge semilingo: Kwenza uphile kancono
by nguDkt uLihle Qulu
nguDkt uLihle Qulu
UDkt uQulu unguSosayensi Wemizwa (Neuroscientist) neSenior Lecturer ophikweni lweSakhiwomuntu, ngaphansi…
Ukubhekana ngqo nesiqhwaga sansukuzonke ukhuvethe
Kuvame ukuthi kuthiwe ukubonga kuyisibunge semilingo, ukuthi kuyiqiniso noma cha, ucwaningo lukhombisa ukuthi ukubonga kungaba eminye yemilingo yempilo enhle yomqondo. Njengoba sisenyangeni uMfumfu okuyinyanga yempilo omqondo, ngithanda ukuba sisondele emandleni okubonga njengesinye sezithako eziyisisekelo sokujabula.
Njengabantu isikhathi esiningi sikholelwa ekutheni ukujabula kuyinhloso yangomuso, isibonelo uma ngishayela le moto, ngizojabula, uma sengihola lesi samba semali, ngizojabulo, uma ngigcagca noma ngithola abantwana ngizojabula. Ngabe kuliqiniso ngempela lokhu? Ngabe sibuka ukujabula ngokuphelele uma sibeka izimoto nokungalawuleki njengezinto eziyizinkomba zenjabulo?
Enye yezinto esiyifundiswe wubhubhane wukuthi impilo yimfushane ukuthi singayeka ukujabula, kwabuye kwasiphaphamisa kabuhlungu ekutheni ukujabula ukukho ezintweni ozibonayo kodwa esimweni somqondo.
Kusemqoka ukubona ukuthi akekho ongakwenza ujabule futhi akukho okungale kwakho okungakujabulisa unomphelo. Uma ungakhumbula umuzwa wokujabula owaba nawo ngowakuthola okunamhlanje awusakunakile uzobona ukuthi izinto ezingale kwakho ngezesikhashana ukuba zikwenze uhlale ujabule.
Eqinisweni ucwaningo lusitshela ukuthi izimomqondo ezifana nokuba nexhwala lexhala, lokhwantalala nolwengcindezi kuncike emizweni yokungajabuli. Ngakho ke uma kunobudlelwano phakathi komuzwa wokungajabuli nezimo zempilo yengqondo, singazama ukuzakhela indawo yethu yokuzijabulisa elawulwayo ngokuguqula indlela esicabanga ngayo.
Kanti kuyini ukubonga? Ukubonga ukukwazi ukuqonda izinto ezinhle empilweni yakho ube nomuzwa wokubonga. Lokhu akusho ukuthi ukubona ukuthi yikuphi okuhle kususa izinselelo empilweni yakho kodwa kuthi qonda yize unezinselelo akulahlekile konke. Abantu ababongayo bakhonjiswe benamandla nobudlelwano obuhlalayo kanye nobungane.
Abaholi abavame ukubonga abasebenzi bavela benabasebenzi abenza ngokwevile futhi bathembekile. Uma abantu benconywa, benza ngokuthe xaxa ukujabulisa umuntu obancomayo. Ukubonga kukhombise ukuthi kuthuthukisa isimomoya somuntu kanye nakho konke komuzwa ngaphakathi.
Ukuzibonga nakho kukhombise ukuthuthukisa isimomoya somuntu nobungcono bokuphila kwakho jikelele. Sidlule ezikhathini ezinzima njengesizwe njengoba kuqhubeke lolu bhubbhane, ukuthi sihlale sinethemba sivuke sibhekane nolunye usuku yize kukhona izinselelo kuyisizathu esanele sokuzincinza inqulu njalo ekuseni bese sithi; “senza kahle”.
Mina ngokwami ngizibekele isikhathi ntambama sokuthi ngibonge kungekhathalekile ukuthi usuku belunzima kangakanani, ngizinqumele ukuba ngilusonge ngethemba ngisho obekukuhle ngalolo lusuku. Lokhu kwakha isimomoya esimnandi ngaphambi kokuthi uyolala futhi kwenza ukuthi ulale zwi.
Ngaphezu kwalokhu, ucwaningo luveza ukuthi ukubonga kunezinsizakalo ebuchosheni okuningi, okubandakanya ukusebenza okukhulu kobuchopho obungaphambili kwesokudla okuvukuza okwezenhlalo,nokubuyisa amagama.
Abantu abahlala bebonga isikhathi esiningi bavamise ukuba nobuchopho obukwazi ukubamba iqhaza ukuthi ukwazi ukuzibamba, ukuthatha izinqumo, ukukhumbula, ukulalela kahle nokunye okuphathelene nokuxhumana kwemizwa.
Uqhude manikiniki phakathi kukaZuma noZondo
Ukubonga kukhuthaza indlela eqondene nokujabula, ukugqugquzeleka, ukugxila futhi kubamba iqhaza elisemqoka ekwengezeni ekuziphatheni. Ezingeni lobukhemikhali bemizwa umuzwa wokubonga kwatholakala ukuthi uthuthukisa ingaphambili lobuchopho eliphathelene nokulawula ulaka, ukuzisola, ihlazo nokunye okungenambuyiselo. ISerotonin, isidlulisimizwa sokujabula sakhombisa ukuqina kubantu abasebenzisa isikhathi sabo bebonga kunokthi bakhononde. Ukubonga kukhombise ukunciphisa izimpawu ezimbi nokuthuthuka kwezingangqo lokulala ngokukhuthaza i-hypothalamus.
Kolunye ucwaningo abantu abahlala bebonga bakhombisa ukungabi nalo ixhala eliningi nokwehla okukhulu kwamazinga okuthuka okwenza inhliziyo isebenze kahle.
Ukulolonga umkhuba wokubonga kumqoka ukuze ukwenze ukuqondile. Ngingaphakamisa ukuthi ube nesikhumbuzi ocingweni lwakho ukuze ube nemizuzu zonke izinsuku ubhale phansi konke okubongayo. Ungakwenza lokhu nomndeni wakho zonke izinsuku noma kanye ngesikhathi sesidlo sangeSonto uwufundele konke okubonile esontweni eliphelayo. Ekuseni ubonge nje ukuvuka uqala olunye usuku.
Ngingaphakamisa futhi ukuba usho okuhle ukuziqinisa wena luqobo njalo ekuseni. Ngiyakuthembisa lenjwayezo izoguqula indlela obuka ngayo umhlaba uyeke ukuba ngonezinkinga kodwa kube ngowokubonga. Sengivala okwanamhlanje ngibonga ofunda lo mbhalo ozokwazi ukuguqula umqondo wakhe kube ngongcono. Inhliziyo ebongayo iyisibunge semilingo. Ngiyabonga
nguDkt uLihle Qulu Oct 8, 2021